ဟာသစုံထောက်ကား နှစ်သက်သူတွေအတွက် The Accidental Detectives 1&2- For her Myanmar
ဟာသစုံထောက်ကား နှစ်သက်သူတွေအတွက် The Accidental Detectives 1& 2
ရင်ခုန်စရာလည်းကောင်း… ပါးစပ်မစေ့အောင်လည်း ရယ်ရ… ယောင်းတို့ ကြိုက်မှာ ကျိန်းသေပဲ…
ရုပ်ရှင်ချစ်သူယောင်းလေးတို့ကို ညွှန်းပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားရှိပါတယ်။ သူက တစ်ကားတည်းဆိုပေမဲ့ တစ်ကားတည်းတော့မဟုတ်ဘူး.. ဟီးဟီး.. ရှုပ်ဝါးလားဟင်… သူက နှစ်ကားတွဲ ယောင်းတို့ရယ်… ဒီဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ပဲ ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲဆိုပြီး ထွက်ထားတာမျိုး…
ဇာတ်ကားအမည်က The Accidental Detective တဲ့။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဟာသ၊ အက်ရှင် နဲ့ စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတို့ကို အချိုးကျကျရောမွှေထားတာမို့ တကယ်ကြည့်ရကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
အဓိက ဇာတ်လိုက်တွေက တခြားသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အက်ဒ်မင်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ သဘောကျခဲ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေပါ။ သူတို့တွေကတော့ မင်းသား ကွန်ဆန်ဝူး နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်ဒေါင်အီ တို့ပါပဲ။
မင်းသား ကွန်ဆန်ဝူးက ရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်ရင်း တစ်ဖက်က သမီးလေးကို ထိန်းနေရသူ၊ စုံထောက်ကြီးရှားလော့ဟုမ်းကို သဘောကျပြီး စုံထောက်ရူး ရူးနေသူ၊ အင်တာနက်မှာ အပျော်တမ်းစုံထောက်အဖွဲ့ထောင်ကာ အမှုတွေကို ခန့်မှန်းနေတတ်သူ၊ ရဲဋ္ဌာနကို သွားရောက်တတ်ကာ အမှုစစ်ဖို့အကြံဉာဏ်တွေပေးတတ်လို့ မောင်းထုတ်ခံရသူ ဒေမန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဆောင်ဒေါင်အီကတော့ တရားခံတွေကို လိုက်ဖမ်းဆီးရာမှာ ရက်စက်ပြတ်သားလွန်းလို့ အထက်အရာရှိတွေက ရာထူးချထားခံရသူ ရဲအရာရှိ နိုတေဆူး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေ ရဲအရာရှိတစ်ဦး လူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။
The Accidental Detective – 1
အသတ်ခံလိုက်ရတာကလည်း သူတို့ရဲ့အခြားမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးပါပဲ။ ဒီလူသတ်မှုနဲ့အတူ အခြား လူသတ်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့သလို အသတ်ခံရတာကလည်း အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေလားလို့ သူတို့နှစ်ဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ….
ဒါကတော့ The Accidental Detective ရဲ့ ပထမကားဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံတွေနဲ့ အိန္ဒိယ မှုခင်းရုပ်ရှင် (၃) ကား
ဒုတိယကားမှာဆိုရင် ယောင်းတို့အချစ်တော် Running Man အဖွဲ့ထဲက လီကွမ်ဆူကလည်း ကွန်ပျူတာပညာရှင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စုံထောက်ကြီး နိုတေဆူး နဲ့ ဒေမန်း တို့ လက်တွဲကာ အလွတ်တန်းစုံထောက်အဖွဲ့ထောင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ထောင်လိုက်တဲ့အခါ စစချင်း အမှုအပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ရှားရှားပါးပါး အမှုအပ်သူတစ်ယောက်ရလိုက်ပါတယ်။ အမှုအပ်သူက သနားဖို့ကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အမျိုးသားက ညဘက်အဆာပြေစားဖို့ အသီးထွက်ဝယ်တာကနေ လုံးဝပြန်မလာတော့ပါဘူး။
သနားစရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးဟာ သူ့ယောက်ျားအမှုကို ရဲစခန်းကလည်း လက်မခံတာကြောင့် ဒေမန်း တို့အဖွဲ့ဆီကို အမှုလာအပ်တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ဒေမန်းတို့ အမျိုးသမီးလေးရဲ့ ယောက်ျားအမှုကို ခြေရာခံရပါတော့တယ်။ ဒီလိုခြေရာခံလိုက်တဲ့အခါ ယောက်ျားဖြစ်သူက မိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူနဲ့အတူ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ နေခဲ့သူတွေအားလုံး ထူးထူးဆန်းဆန်း သေဆုံးခဲ့တာတွေကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ…
ဒါကတော့ The Accidental Detective ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်မစေ့အောင် ရယ်ရသလို၊ ရင်တမမနဲ့ကြည့်ရတဲ့၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ The Accidental Detective ရုပ်ရှင်ကို ယောင်းတို့ အားလပ်ချိန်မှာ ကြည့်လို့ရအောင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရငျခုနျစရာလညျးကောငျး… ပါးစပျမစအေ့ောငျလညျး ရယျရ… ယောငျးတို့ ကွိုကျမှာ ကြိနျးသပေဲ…
ရုပျရှငျခဈြသူယောငျးလေးတို့ကို ညှနျးပေးခငျြတဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားရှိပါတယျ။ သူက တဈကားတညျးဆိုပမေဲ့ တဈကားတညျးတော့မဟုတျဘူး.. ဟီးဟီး.. ရှုပျဝါးလားဟငျ… သူက နှဈကားတှဲ ယောငျးတို့ရယျ… ဒီဇာတျဆောငျတှနေဲ့ပဲ ပထမတှဲ၊ ဒုတိယတှဲဆိုပွီး ထှကျထားတာမြိုး…
ဇာတျကားအမညျက The Accidental Detective တဲ့။ ဒီဇာတျလမျးဟာ ဟာသ၊ အကျရှငျ နဲ့ စုံထောကျဇာတျလမျးတို့ကို အခြိုးကကြရြောမှထေားတာမို့ တကယျကွညျ့ရကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးပါ။
အဓိက ဇာတျလိုကျတှကေ တခွားသူတှတေော့မဟုတျပါဘူး။ အကျဒျမငျတို့ ငယျငယျကတညျးက ဇာတျလမျးတှဲတှမှော သဘောကခြဲ့ရတဲ့ သရုပျဆောငျတှပေါ။ သူတို့တှကေတော့ မငျးသား ကှနျဆနျဝူး နဲ့ သရုပျဆောငျ ဆောငျဒေါငျအီ တို့ပါပဲ။
မငျးသား ကှနျဆနျဝူးက ရုပျပွစာအုပျဆိုငျဖှငျ့ရငျး တဈဖကျက သမီးလေးကို ထိနျးနရေသူ၊ စုံထောကျကွီးရှားလော့ဟုမျးကို သဘောကပြွီး စုံထောကျရူး ရူးနသေူ၊ အငျတာနကျမှာ အပြျောတမျးစုံထောကျအဖှဲ့ထောငျကာ အမှုတှကေို ခနျ့မှနျးနတေတျသူ၊ ရဲဋ်ဌာနကို သှားရောကျတတျကာ အမှုစဈဖို့အကွံဉာဏျတှပေေးတတျလို့ မောငျးထုတျခံရသူ ဒမေနျး အဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
ဆောငျဒေါငျအီကတော့ တရားခံတှကေို လိုကျဖမျးဆီးရာမှာ ရကျစကျပွတျသားလှနျးလို့ အထကျအရာရှိတှကေ ရာထူးခထြားခံရသူ ရဲအရာရှိ နိုတဆေူး အဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့ နှဈယောကျရဲ့ အသိမိတျဆှေ ရဲအရာရှိတဈဦး လူသတျမှုနဲ့ ဖမျးဆီးခံလိုကျရပါတယျ။
အသတျခံလိုကျရတာကလညျး သူတို့ရဲ့အခွားမိတျဆှတေဈဦးရဲ့ ဇနီးပါပဲ။ ဒီလူသတျမှုနဲ့အတူ အခွား လူသတျမှုတှဆေကျတိုကျဖွဈလာခဲ့သလို အသတျခံရတာကလညျး အမြိုးသမီးတှပေဲဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီအခါ ကှငျးဆကျလူသတျမှုတှလေားလို့ သူတို့နှဈဦး စုံစမျးစဈဆေးကွညျ့တဲ့အခါ ….
ဒါကတော့ The Accidental Detective ရဲ့ ပထမကားဇာတျလမျးအကဉျြးဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> စိတျဝငျစားစရာ ဇာတျလမျးတညျဆောကျပုံတှနေဲ့ အိန်ဒိယ မှုခငျးရုပျရှငျ (၃) ကား
ဒုတိယကားမှာဆိုရငျ Running Man အဖှဲ့ထဲက ယောငျးတို့အခဈြတျော လီကှမျဆူကလညျး ကှနျပြူတာပညာရှငျအဖွဈ ပါဝငျထားပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ စုံထောကျကွီး နိုတဆေူး နဲ့ ဒမေနျး တို့ လကျတှဲကာ အလှတျတနျးစုံထောကျအဖှဲ့ထောငျလိုကျပါတယျ။
ဒီလို ထောငျလိုကျတဲ့အခါ စစခငျြး အမှုအပျတဲ့သူ တဈယောကျမှ မရှိပမေဲ့ နောကျဆုံးတော့ ရှားရှားပါးပါး အမှုအပျသူတဈယောကျရလိုကျပါတယျ။ အမှုအပျသူက သနားဖို့ကောငျးတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူ့အမြိုးသားက ညဘကျအဆာပွစေားဖို့ အသီးထှကျဝယျတာကနေ လုံးဝပွနျမလာတော့ပါဘူး။
သနားစရာကောငျးတဲ့ ကိုယျဝနျသညျအမြိုးသမီးဟာ သူ့ယောကျြားအမှုကို ရဲစခနျးကလညျး လကျမခံတာကွောငျ့ ဒမေနျး တို့အဖှဲ့ဆီကို အမှုလာအပျတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ဒမေနျးတို့ အမြိုးသမီးလေးရဲ့ ယောကျြားအမှုကို ခွရောခံရပါတော့တယျ။ ဒီလိုခွရောခံလိုကျတဲ့အခါ ယောကျြားဖွဈသူက မိဘမဲ့တဈဦးဖွဈပွီး သူနဲ့အတူ မိဘမဲ့ကြောငျးမှာ နခေဲ့သူတှအေားလုံး ထူးထူးဆနျးဆနျး သဆေုံးခဲ့တာတှကေို တှလေို့ကျရတဲ့အခါ…
ဒါကတော့ The Accidental Detective ဇာတျလမျးရဲ့ ဒုတိယပိုငျးဖွဈပါတယျ။
ပါးစပျမစအေ့ောငျ ရယျရသလို၊ ရငျတမမနဲ့ကွညျ့ရတဲ့၊ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ The Accidental Detective ရုပျရှငျကို ယောငျးတို့ အားလပျခြိနျမှာ ကွညျ့လို့ရအောငျ ညှနျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Tags: Comedy, Detective, Korea Film, Movie review
ဘီကီနီတောင်တက်မယ် Gigi Wu တစ်ကိုယ်တော် တောင်တက်ခရီးစဉ်၌ သေဆုံး
Sugar Cane January 24, 2019
အချစ်ဟာသဝတ္ထု ချိုချိုလေးနှစ်သက်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် “သစ်ခက်ငါး”
Sugar Cane April 19, 2019